War deg deg ah: Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo laalay mowshin laga keenay heshiiskii Soomaaliya iyo Somaliland. | Salaan Media
War deg deg ah: Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo laalay mowshin laga keenay heshiiskii Soomaaliya iyo Somaliland.
Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu shaaciyay in aysan dhici doonin in lahor keeno baarlamaanka mooshinkii xubna kamid ah baarlamaanka Soomaaliya ka gudbiyeen heshiiskii Soomaaliya iyo Somaliland.
Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu yiri, “Mudanayaal nagama sugeysaan in mowshinkii laga keenay Heshiiskii dowalda Soomaaliya iyoSomaliland in halkaan looga doodo. Wixii qaldan gudoonka baarlamaanka ayaa saxeya”.
Go’aanka gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu soo baxayaa iyada oo dhawaan xildhibaanno uu kamid ahaa Cali Khaliif Galeyr ay mowshin ka gudbiyeen heshiiskii Turkiga ku dhex maray dowlada Soomaaliya iyo Somaliland.